2020, nakaton’i Arzantina tamin’ny latsabato manan-tantara naneken’ireo Loholona ny fanalànjaza. · Global Voices teny Malagasy
'Tsy misy inona ambara, fa fihetsehampo ihany no zaraina'
Voadika ny 20 Janoary 2021 9:00 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Français, Português, русский, Ελληνικά, Español
“Tombotsoan-tsaranga ny fahatafavoahana velona amin’ny fanalànjaza.” Fiaretantory (fiambenana) tao Buenos Aires nandritra ny adihevitry ny Kaongresy momba ny fanalànjaza tamin'ny taona 2018. Saripika an'i Juan Diez tao amin'ny Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
Tamin'ny maraimben'ny 30 Desambra, taorian'ny fivoriana naharitra 13 ora mahery, ary taorian'ny iray volana mahery nisian’ny hevitra mifanohitra , “fampielezan-kevitra maloto, hetsi-panoherana sy fiambenana teny an-dalambe, nanamarika ny tantara ny Loholona Amerikàna rehefa nandany ny lalàna momba ny Fampitsaharana an-tsitrapo ny fitondrana vohoka. Ity lalàna ity dia manao ho ara-dàlana ny zo amin'ny fanalànjaza, tsy misy faneriterena na antony, ho an'ny vohoka hatramin'ny 14 herinandro. Lany tamin'ny 38 vato mpanohana, 29 vato mpanohitra, ary iray tsy naneho hevitra.
(Fanazavana ny anaty sary: Lahatsary nalaina tamin'ny vaovao an-tsary arzantina amin'ny fiteny espaniôla « Izay no lalàna – ara-dalàna ny fanalànjaza » )
Tamin'ny fandaniana io volavolan-dalàna io, i Arzantina no lasa firenena fahadimy tany Amerika Latina nanao ho ara-dalàna ny fanalànjaza – aorian'ny Kiobà, Goiana, Pôrtô Rikô, ary Orogoay – ary lasa fahafito manerana ny kaontinanta amerikana iray manontolo.
Nampanantena ny Filoha Alberto Fernàndez hatramin'ny niatombohan'ny fe-potoana fiasàny, izay nanomboka tamin'ny volana desambra 2019, fa hanolotra ilay olana ny voalohandohan'ny volana Martsa, saingy naato anefa ny zava-drehetra noho ny fepetran'ny hamehana napetraka mba hampitsaharana ny fiparitahan'ny COVID-19. Taorian'ny fanerena avy amin'ireo fikambanam-behivavy manerana ny firenena , dia nandefa ilay volavolan-dalàna ho any amin'ny Kongresy izy ny 16 Novambra. Nanomboka tamin'ny 1 Desambra ny fizotrin'ny fankatoavana ary nifarana tamin'ny latsabato lehibe ny 30 Desambra.
Vakio ihany koa: nanohy ny tolona ho an'ny #fanalanjazaAraDalàna 2020 ny vehivavy, any Arzantina. [Ang.]
Ny taona 2018 no fotoana voalohany niadian-dry zareo hevitra momba ilay volavolan-dalàna. Tamin'izany fotoana izany no nahazoana fankatoavana avy amin'ny Antenimieran'ny solombavambahoaka, saingy nolavin’ny Loholona niaraka tamin'ny elanelam-bato fito anefa izany taty aoriana. Na teo aza ny fihemorana, nitohy hatrany ny fikatrohana satria nijanona teny ihany foana ny olana ary ny fakàna fankatoavan'ny daholobe an'ilay volavolan-dalàna no notakian'ilay fanentanana; izany dia nanamafy ny fampitombona vàhana ny “Green Tide” sy ireo tambajotra fanampiana an'ireo izay mila mandalo fanalànjaza azo antoka.
Nanjary lohateny lehibe tamin'ny media nasionaly sy iraisam-pirenena ny tatitrin'ny vaovao momba ny fandaniana io lalàna io. Nameno ny arabe ny hetsika fanehoana hafaliana. Tondraka fanehoana hifaliana be koa tao amin’ny media sôsialy. Ity ny hafatra avy amin'ny ‘’ Amnesty International Argentina’’ :
Tampoka teo dia lasa fihetseham-po daholo izany. Fandresena ho an'ny hetsiky ny vehivavy. #EsLey (LalànaIzany) #AbortoLegal2020 (FanalànjazaAraDalàna2020)
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) 30 Desambra, 2020
Ireto ny sasany amin'ireo fanehoankevitra avy amin'ny lafivalon'i Arzantina:
Tsy misy inona ambara, fa fihetseham-po ihany no zaraina. #EsLey 💚
Lahatsarin'i @vicki_freire pic.twitter.com/qKfCiKTwoX
— Editorial Chirimbote (@ChirimboteEd) 30 Desambra, 2020
Vao tonga mihintsy aho, ary mbola tsy mety mino. Nandro aho, nifoha i Renata ary ny zavatra voalohany nolazainy tamiko dia ny hoe “io no lalàna ve Neny ? “. “ENY”, hoy aho taminy ary nifanoroka sy nifamihinana izahay izay tsy hohadinoiko mihitsy eo amin'ny fiainako. Ho an'i Reni sy ho an'ny rehetra. #EsLey (io no làlana) 💚
— Rosario (@RoGarriga) 30 Desambra, 2020
Maraina mafinaritra, sa tsia ? #ESLEY (Io no làlana)
— Miaytsu (@Miggmicaela) 30 Desambra, 2020
Fanalànjaza ara-dalàna : nanao latsabato manan-tantara i Arzantina ho fanohanana ny fiainana sy ny fahasalaman'ny zazavavy , ny vehivavy ary ny olona bevohoka.
Toy izao no fomba hankalazàntsika azy.#Cordoba #AbortoLegal2020 (Legal Abortion 2020)
— Paula Hernández 💚 (@PaulidelSur) 30 Desambra, 2020
Toy izao no nankalazàn (ny tanànan'i) Mendoza#ESLEY #AbortoLegalYa #AbortoLegal2020 pic.twitter.com/qGwBD70UYe
— Cecilia Soria 💚✊ (@Ceci_Soria_) 30 Desambra, 2020
Fiarahabana avy any ivelan'i Arzantina
Tao amin'ny ”Twitter”, nisy ihany koa ny fankalazana sy fiarahabana avy any ivelany. Ireto ny sasany amin'ireo hafatra avy any Espaina:
Nifoha aho nahita an'i Arzantina afaka sy feminista kokoa. Tsy hisy terena hiteraka intsony. Azo antoka kokoa ho an'ny vehivavy rehetra i Arzantina 💚#ESLEY
— Madame Artichaut ♀💚🔻 (@alcachofit4) 30 Desambra, 2020
Nahazo valiny ihany nony farany ny tolona lavitra nataon'izy ireo.
Arahabaina, Arzantina. Fanalànjaza izao! #esLey
— Luiso García (@luixo80) 30 Desambra, 2020
Arahabaina ry namana ao Arzantina! Ny zava-bitanareo tamin'ny tolona nataonareo dia midika zo, midika fahamendrehana, midika fiainana!💚✊#ESLEY
— Chica Torpedo🔻 🤬😑😈 (@lachicatorpedo) 30 Desambra, 2020
Arabaina, Arzantina! #EsLey #AbortoLegal202
Sary: @/mayragiselle.r en Instagram pic.twitter.com/08zKQdGEdD
— ⚡Troyiqueer Ana🦄🍣🌈🍕 (@analadetuiter) 30 Desambra, 2020
Amin'ny anaran'ny vondrona feminista chiliana HARTAS, niarahaba ireo Arzantina ry zareo:
Toy izao no fomba firosontsika #MareaVerde (Onja Maintso)
Fihina ho an'ireo namanay ao Arzantina #AbortoLegal2020 #EsLey 💚
— #HartasMujeres (@HARTASMujeres) 30 Desambra, 2020
Ny fiaraha-mientana “No Te Calles” dia nandefa ny arahabany avy any Mexico:
Eny, nahavita izany i Arzantina! 💚💚💚
Avy aty Meksika izahay no miarahaba sy manoroka azy ireo noho ny tolona tsy misy fitsaharany nataony, ho feminista daholo i Amerika Latina! #EsLey
— ColectivaNoTeCalles (@NoTeCallesMor) 30 Desambra 2020
Avy any Bolivia, hoy i Artemisa:
Namihina ahy izy raha nitomany aho nandre ny vaovao. Fomba tsara tsy nisy tahaka izao namaranana ity 2020 ity.💚#EsLey.
— Artemisa (@TuAquelarre) 30 Desambra, 2020
Nankalazaina tao Venezoela ihany koa ilay vaovao, ary toy izao ny nolazain'ny olona iray:
Nifoha aho no nahita fa vita ilay lalàna 💚 Nivaly ny tolona natao an-taona maro. #EsLey
💚💚💚💚 Ny onja maintso 💚💚💚💚
Manantena aho fa ho vitantsika ao #Venezuela io zava-bita io. pic.twitter.com/wS8PBx4HGS
— Mariana 💜🌺 (@Marifergui) 30 Desambra, 2020